असार ३ मा हुने भयो मिस्टर एण्ड मिस एम्पेरर को अडिसन ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > असार ३ मा हुने भयो मिस्टर एण्ड मिस एम्पेरर को अडिसन !
असार ३ मा हुने भयो मिस्टर एण्ड मिस एम्पेरर को अडिसन !
June 10, 2018 Nepali
परफेक्ट प्लानेट ईन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा हुन लागेको मिस्टर एण्ड मिस एम्पेरर गेटवे टु कलिउडको काठमान्डौ अडिसनको मिती तोकिएको छ । आयोजकका अनुसार अब काठमान्डौं अडिसन असार ३ गते दरबारमार्ग स्थित दरबार लञ्जमा हुने छ ।
नयाँ प्रतिभावान युवा युवतीलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अवसर दिने उदेश्यले यो प्रतियोगीताको आयोजना गरीएको आयोजक परफेक्ट प्लानेटले जानकारी गराएको छ । सोही अनुसार अहिले राजधानीका बिभिन्न क्याम्पसहरुमा कलाकारहरुको साथमा क्याम्पेनीङ्ग भैरहेको पनि बताईएको छ ।
यो प्रतियोगीता सफल पार्न अभिनेता सालोन बस्नेत र आमेश भण्डारी सक्रियताका साथ लागी परेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
काठमान्डौ सँगै पोखरा,चितवन,बुटवल,नेपालगञ्ज,धरान,हेटौडा,बिराटनगर, बाग्लुङ्ग र म्याग्दीमा समेत अडिसन हुने यो प्रतियोगीताबाट बिजेता बनेकाले म्युजीक भिडियो र चलचित्रमा अभिनय गर्ने अवसर सँगै बिभिन्न उपहार पनि प्राप्त गर्ने छन् ।
१६ देखी २४ वर्ष सम्म उमेर भएका नेपाली नागरीकहरुले सहभागीता जनाउन पाउने यो प्रतियोगीतामा पुरुषको लागी ५ फिट ५ ईन्च देखी माथी र महिलाहरुको लागी ५ फिट २ ईन्च भन्दा माथी उमेर तोकीएको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागि हुनको लागि एसएमएस मार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसको लागि SMS बक्समा गई ‘Empror <space> Your Name, age, gender and location’ टाइप गरी 31003 मा पठाउनु पर्नेछ । साथै, दशवटै शहरका विभिन्न स्थानहरुबाट समेत आवेदन फारम प्राप्त हुने बताईएको छ ।